Kooxda Manchester City oo wakiilo u soo daawada u dirsatay da’yarka reer Talyaani ee Sandro Tonali – Gool FM
Kooxda Manchester City oo wakiilo u soo daawada u dirsatay da’yarka reer Talyaani ee Sandro Tonali
(Manchester) 25 Nof 2019. Kooxda kubada cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay wakiillo u soo daawada u dirsatay da’yarka reer Talyaaniga ee Sandro Tonali.
Indho-indheeyeyaal ka socda Kooxda reer England ee Manchester City ayaa soo daawaday horumarka uu sameynayo laacibka khadka dhexe ee naadiga Brescia ninka la yiraahdo Sandro Tonali.
18-kii bilood ee la soo dhaafay 19-sano jirkaan ayaa naftiisa ka dhigay mid ka mid ah rajada ugu sarreysa ee kubadda cagta Talyaaniga, qaab ciyaareedkiisuna waxa uu ka caawiyay kooxda Brescia inay dib u hesho booskeeda horyaalka Serie A.
Tonali, kaasoo haatanba u saftay kulankiisii ugu horreeyey xulkiisa qaranka Talyaaniga ayaa dhaliyey hal gool waxaana uu dhiibay ama caawiyey labo gool oo kale 11 kulan oo uu ciyaaray kulammada sare ee horyaalka.
Natiijadaas ayaa ka dhigtay inay kororto xiisaha loo qabo saxiixa xiddigan, Warsidaha Gazzetta dello Sport ayaana shaaca ka qaaday Man City ay wakiillo u soo daawada u dirsatay xiddigan kulankii xalay kooxdiisa Brescia ay la ciyaaraysay Roma.
Inkastoo dalab aan laga fileynin bisha Janaayo, haddana kooxda City waxa ay doonaysaa inay go’aan ka gaarto bartilmaameedkooda xagaaga sida ugu dhaqsiyaha badan.
Manchester United ayaa sidoo kale la soo sheegayaa inay daawatay Tonali tan iyo markii uu bilowday kal ciyaareedkan, waxaana Sky Blue ay tartan ku aaddan saxiixa laacibkan kala kulmaysaa kooxda ay ka wada dhisan yihiin Magaalada Manchester.
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Paris Saint-Germain vs Real Madrid ka hor kulankooda habeen dambe ee Champions League… (Yaa xiddigaha ugu badan ku leh?)